Shiinaha Push POP Bubble Sensory Fidget Toy Bubble Sensory Decompression Autism Baahiyaha Gaarka ah ee Relief Cadaadiska Silicone Tuujiya Qalabka Ciyaaraha Dareenka Aad Ugu Habboon Xafiiska iyo Gargaarka Cadaadiska Nolosha (Jaalaha Octagon Yellow) iyo soosaarayaasha | Transben
Weligaa carruurtaada ma qabataa, ama xitaa adiga laftaada, oo ku soo boodaya xumbada saxda ah sanduuqa xirmada? Markaa waad jeclaan doontaa fallaagadan xunxun.
Ust riix xumbada goobaha hoos waxayna kadhigayaan dhawaq yar oo soo baxaya; ka dib rogrog oo dib u bilow! Weligood dib loo isticmaali karo lana dhaqi karo, sidoo kale.
Wax sun ah, aan dhadhan lahayn, wax dhibaato ah uma geysan doono dadka iyo xayawaanka rabaayadda ah.
Midabbo dhalaalaya iyo codad wacan ayaa hubaal ah inay ka farxinayaan ilmo kasta!
Hadiyad ku habboon saaxiibkaa.
Nooca Wax dubid
Lambarka Moodalka D6029
Waxyaabaha Silikoonka Fasalka Cuntada
dalab keega Bakeware
heerkulka saxda ah -40 ~ 230 ℃
OEM / ODM haa
Shahaadada Rohs, SGS, FDA, LFGB
cabirka alaabta 100x80x25mm
cabirka alaabta 12Pcs / 200x360x100mm
Cabirka sanduuqa dibedda 96pcs / 200x360x100mm
Mugga sanduuqa dibedda 0.36cbm
Shuruudaha lacag bixinta TT
Hore: Cajaladda Afka Dhiska ee Whisk Whisk Birta Birta Birta ah ee Whisks lagu xidho cusbada epoxy
Xiga: Waraaqaha Bacaha Weyn ee Caaga ah